Tababare Solari oo si qoto dheer uga hadlay kulanka habeen dambe ee El Clásico, muxuuse ka yiri Lionel Messi? – Gool FM
Tababare Solari oo si qoto dheer uga hadlay kulanka habeen dambe ee El Clásico, muxuuse ka yiri Lionel Messi?
Dajiye February 5, 2019
(El Clásico) 05 Feb 2019. Tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa sheegay inuusan marna ka niyad jabi doonin inuu guul ka gaaro Barcelona kulanka El Clásico-da lugta koowaad wareega 4-ta ee Copa del Rey ay habeen dambe ku booqan doonaan garoonka Cump Nou.
Hadaba kahor ciyaartan tababare Santiago Solari ayaa wuxuu kasoo muuqday shir jaraa’id uu diirada ku saaray ka hadlida kulanka adag ee xiisaha badan El Clásico.
Tababare Santiago Solari ayaa dhinaca kale sheegay in hadii uu ka maqnaado Messi kulankan iaysan wax saameyn ah ku yeelan doonin ciyaarta dhex mari doonta habeen dambe kooxaha Barcelona iyo Real Madrid.
“Waa kulan u dhaxeeya sida caadiga ah laba kooxood ee aad u tartanta sida Milan iyo Inter, River Plate iyo Boca Juniors, iyo sidoo kale Real Madrid iyo Barcelona”.
“Waxaan isku isku arki doonaa labo tartan kala duwan, waxaan isku dayi doonaa inaan ka guuleysano, waxaan bixin doonaa awood iyo inaan diirada saarno, ma jirto wax isbadal ah ee u dhexeey horyaalka iyo tartamada kale, ugu horeyn waa inaan diirada saarnaa kulanka habeen dambe sababtoo ah wuxuu inoo yahay muhiim”.
“Xaqiiqdii ciyaartoyda oo dhan waxay diyaar u yihiin kulankan, Jesús Vallejo ayaa ku soo laabtay tababarka, waxyaabaha ugu adag ee macalimiinta markan oo kale ayaa ah doorashada liiska ciyaartoyda, balse waxa ugu muhiimsan ayaa ah in qof walba uu bixiyo dadaalka ugu fiican si aan u guuleysano”.
“Waxaan heysanaa awood aan diirada saari karno kulanka beri ee El Clásico, waana wax muhiim ah”.
Sergio Ramos oo dhiganaya AROOS WAYN iyo Martida oo loo diiday Taleefanada iyo Kaamirooyinka...(Sidee wax u jiraan??)+Ogoow Goorta iyo Goobta uu Aqal galka ka dhacayo